I-30 ENTLE YEENWELE ZEENWELE ZEENWELE - IFASHONI
Eyona Ifashoni I-30 entle yeenwele zeenwele zeenwele
I-30 entle yeenwele zeenwele zeenwele
Ngaba ujonge kwimidlalo ye-braids entle ngosuku lwakho lomtshato? Khuthazwa nguLupita, Zoë kunye nezinye zezinto esizithandayo. Iifoto zeT & S
USophie Ross ngumbhali oPhezulu wokuKhuphela eAdore Me.
USophie ngumbhali onamava kunye nombhali wobuhle.
USophie usebenze njengoMhleli woMdibanisi weKnot ukusuka kwi2017 ukuya kwi2019.
Ukuhlaziywa kwe-Sep 09, 2020
Xa kuziwa kwiinwele ezimnyama ezilukiweyo — uninzi lwazo olunokuthatha iiyure ukufezekisa- kubalulekile ukuba uzilungiselele kangangoko malunga nokuba yeyiphi na indlela oyifunayo kusuku lwakho lomtshato. (Kuyacaca ukuba kuya kufuneka wazi ukuba lingakanani ixesha oya kulibeka ekuhlaleni kwisitulo sakho sezinwele ngenjongo yokubambelela usuku lwakho lweshedyuli .)
Iindaba ezimnandi zilungile kwii-braids, unayo!). Khuthazwa ziinwele ezintle ezimnyama ezilukiweyo ezemidlalo zezinye zezinto esizithandayo, ngezantsi.
ICinnamon Bun Braids
Yenza njengoJanelle Monae kwaye unxibe ii-cinnamon bun braids ezimbini ezinamaso, iiperile okanye ezinye Izixhobo zomtshato uvalele ngaphakathi.
Ukujonga intombazana epholileyo ekugqibeleni, dibanisa ikona yeklasikhi enesuti emhlophe, ingubo yobufazi okanye nantoni na ephakathi. (Ngokusisiseko, ii-cornrows zibukeka zipholile, zihlala zikhona.)
Isitayile sika-Amandla Stenberg asiphelelwa lixesha. Awungekhe uhambe gwenxa ngamakhonkco amathathu abuyiselwe emva kwi-chignon ephantsi.
Ngebhedi yegolide ephezulu
Khuthazwa ngumlingisi uDanai Gurira kwaye unxibe ii-braids zakho ezibuyiselwe umva ngebhande legolide okanye-kungcono kodwa-tiara yomtshato. (Sisenomkhuhlane wasebukhosini, kulungile?)
Yithi 'ewe' kumthamo omkhulu we-bouffant braid njengoKelly Rowland. Bhangqa ngamacici e-chandelier ukuze ujongeke njengaye.
Nokuba unxibe phantsi (njengoJustine Skye) okanye ubuyile umva, ii-braids ezinkulu, ezibini zidityaniswe namacici esitatimenti (hello, hoops) ziya kuhlala zikhangeleka zikulungele kwaye zilungele umtshato.
yimalini iintyatyambo zomtshato
Thatha u-Lisa Bonet ngokubamba icala elinye kuphela kwisitayile esimnandi nesingalinganiyo.
Yongeza ubuntu kwinwele yakho eboshiweyo ngokuqinisekisa ukuba inxenye yeekona zakho ayihambelani ncam, njengemodeli kaDamaris Lewis's zig-zagged and curved hair hairstyle.
Kuyamangalisa njani ukuba isithsaba sika-Issa Rae esine-sleek yegolide? Buza umgcini weenwele zakho ukuba asongele ii-braids ezincinci ezirhangqileyo ngaphezulu kwentloko yakho, emva koko uthambise iinwele zakho zendalo ezikhululekileyo ngaphantsi kukaIssa.
Uhlobo lukaLetitia Michelle Wright — lugqitywe ngamakhonco kunye nebhantshi ejijekileyo — yenziwa yadlala ngakumbi kwaye inesitayile esinamakhonkco aqaqambileyo eenwele.
izinto zokwenza kwitheko lomtshato ngaphandle kokudanisa
Imangalisa njani inwele yeLaverne Cox apha? Ukukhululeka kwakhe, i-ombré kuyaphela kukuxhasa ii-braids phezulu-ngokugqibeleleyo.
U-Lupita Nyong'o sesona sitayile sokugqibela kunye neempawu zobuhle. Thatha ikhephu kwikhaphethi yakhe ebomvu 'yenze kwaye ufumanise ii-braids zakho phezulu ziye kwindawo encinci (ngendlela elungileyo!), Uhlaziyo lwe-asymmetrical.
Sithathekile yindlela intombazana epholileyo uKat Graham enxibe ngayo ii-dreadlocks ezingenazimpiko kunye neziphelo ezijijekileyo kunye nemibala eqaqambileyo ye-caramel.
Isithsaba seBlue textured
Isithsaba sikaJanelle Monae esenziwe ngombala esimhlophe siyamangalisa. Fumana ukubukeka okufanayo kwikhaphethi ebomvu ngokuba nomxube wakho weenwele kwimisonto yentsimbi.
Ukuhamba kwePigtail Braids
Ixesha elide likaYara Shahidi, ii-pigtail braids zezona ndlela zilungileyo zokutshata ze-boho. (Asitsho ukuba kufuneka ubatshintshele kumgangatho wokudanisa, kodwa akunjalo hayi Ndisithi kufuneka wenze njalo.)
UFulani kunye neCornrow Combo
Kutheni ukhetha enye nje? Shayela iinwele zakho ecaleni ngeekona, kwaye unxibe ezinye kwii-Fulani braids ezinxitywe egxalabeni lakho njengoSerayah.
Yenza njengomlingisi uLogan Browning kwaye uphonsa ezinye izinto ezifudumeleyo, ezahlukileyo ukongeza ubunzulu kwiinwele zakho zokomeleza. (Siyayithanda isiqingatha sokuqhina phezulu asikhuphe apha naye.)
Le yinye yesitayile eboshiweyo ayisiyiyo eyentliziyo etyhafileyo. Yiya ngesibindi ngomthi weplatinam, emva koko ubhince kwaye ubuye umva njengoZoë Kravitz. I-chic ngokupheleleyo, akunjalo?
Nzulu Red Hue
Kumangalisa njani ukujonga kukaKeke Palmer ngeebhondi zakhe ezibomvu zeFulani ezitsalwe kwi-updo?
Isiqingatha seKona, Isiqingatha seNdalo
Thatha uluvo ku-Uzo Aduba kwaye vumela iinwele zakho zendalo zikhanye ngezinye izinto ezilula, ezenziwe ngobuso ngaphambili.
IVoluminous Fulani Braids
Nokuba inxityiwe kwaye itshayelwe ecaleni (njengeGabrielle Union) okanye ibuyiselwe kwisitayile sokuphakama, ii-volumous Fulani braids ziya kuhlala zikhangeleka zintle.
izimvo zomtshato ezisondeleyo ezibini
Ibhanti enkulu eboshiweyo
Singayikhetha njani indawo ye-favoite yohlaziyo luka-Lupita Nyong'o? Sithanda ii-braids kwitempile yakhe kunye ne-bun ye-braids ejikelezayo ngaphezulu.
Siyayithanda indlela umlingisi u-Ajiona Alexus azinxiba ngayo ii-braids zakhe ezifunjelweyo ngaphezulu kwentloko yakhe-kodwa imikhwa evulekileyo, engenamandla yokwenza ubuso bakhe inokuba yeyona ndawo ibalaseleyo.
Nokuba ufuna ukusasaza iimbalasane ezimbalwa kwimbonakalo yakho eboshiweyo okanye uye emthunzini ohluke ngokupheleleyo, sonke sinokuvuma umlingisi we-Essence Atkins's caramel-hued hairstyle ebukekayo ibonakala imangalisa.
Ngeenwele zakhe ezikhutshiweyo kwaye zafakwa i-asymmetrically ngaphezulu kwentloko yakhe, uTiffany Hadish usinika i-retro vibes ezinkulu ngale ndlela yokuluka iinwele.
Amathathu amancinci amaBraids aphezulu
Ngaba ungaziva ngathi uhleli esihlalweni somgcini weenwele zakho kangangeeyure? Nxiba iinwele zakho ezantsi, ezendalo kunye ne-crimped kwaye ubuze nje u-stylist wakho ukuba akunike ezintathu (okanye nokuba zininzi kangakanani na ozifunayo!) Iingwele ezicocekileyo ngaphezulu kwenwele yakho.
Ngokuqhelekileyo iBouffant egqibeleleyo.
Amacangci amancinanana asetempileni ayincam nje yomdlali weqonga u-Yaya DaCosta onwele kamnandi-siyayithanda indlela awayezinxiba ngayo ii-curls zakhe zendalo ezifumene phezulu entlokweni yakhe kwi-bouffant.
Siyaphambana sithandana nonwele lukaBeyoncé olwalukiweyo. Iponi ebuyileyo ebuyiselweyo kunye nentsontelo ende (enye ibhaskithi esongelwe umtya womsila) intle, inobuhle kwaye — ngaba singatsho?
Fumana iphefumlelwe ngu-Amandla Stenberg kunye ne-rock lob-length braids yomtshato wakho. (Bow tie, ukhetho.)
Ukukhupha iinwele ezipholileyo ze-Zoë Kravitz zezinwele, nxiba iibhokisi zeebhulukhwe ezahlulwe embindini nge-wavy encinci. Ke chic.
izimvo zezipho zeshawari yomtshato
isikhumbuzo somtshato izipho imibono yabazali
ndiyakuthanda iikowuti ezimnandi
iingoma zomtshato zikamama nonyana eziphezulu ezili-100
apho unokuthenga khona umama wabanxibi
Iminyaka eli-10 yesipho semveli